Dhuuqmada Bishinta Iyo Noocyada Ay Kala Tahay
» Dhuuqmada Bishinta Iyo Noocyada Ay Kala Tahay
Hadalka naxariista iyo sheekada ham hamta (Sheekada Macaan) ayaa ah talaabada ugu horeeysa ee weerarka galmada , waxaana la tilmaamay xitaa xaaska mudda dheer la qabo marka sheekada macaan ee xod-xodashada maqasho in ay jiriricooto . Dhunkashada
Dhuuqmada waxaa ugu macaan in labada raaxeysanaya midba mid kale hal bishin ka dhuuqo tusaale in ninka dhuuqo bishinta hoose ee haweeneyda halka iyana ay jaqeyso midda sareeysa.
Ragga ayaa lagula talinayaa in ay ogaadaan in haweenki jecel yihiin dhuuqmada in bishinta hoose si macaan looga nuugo iyadoo gaarta in ay soo buurato markasna si yar ilkaha ugu riixaya , waxaana la doonaya in uu uga jaqo sida in uu malab dhuuqayo oo kale .
Haweenka kacsi waali ah ayay ka qaadaan iyo istiin macaan marka si toos looga nuugo ibta naaska iyadoo si khafiif ah uga qaniinaya.
Calaacasha oo laga dhunkado iyo xagashe hoose lugta haweenka raaxo macaan ayay ka helaan , waxaa kale oo jira haweenka in laga dhunkado indhaha iyo qoorta hoosteeda ku kacsada .
Anonymous11/16/2010what a fantastic post, please keep up the good workSomali Social NetworkReplyDeletemohamed5/09/2011naagta sidee bishinta hoose loga jaqaa hadeeytahay mit tubaakada cuntaReplyDeleteAdd commentLoad more...